Tag: fizahana | Martech Zone
Ao amin'ny tsena mpifaninana izaitsizy ankehitriny, zavatra iray no azo antoka: ny fanandramana amin'ny varotra an-tserasera dia tsy maintsy ahitana tetikady marketing finday, fa raha tsy izany dia tsy hahita hetsika maro ianao! Betsaka ny olona ankehitriny no andevozin'ny findainy, mazàna satria efa zatra ny fantsona media sosialy, ny fahaizana mifandray amin'ny hafa avy hatrany, ary koa amin'ny filàna "mijanona amin'ny hafainganam-pandeha" amin'ny zava-dehibe na tsy dia misy dikany . As Milly Marks, manam-pahaizana amin'ny
Amin'ny faran'ity taona ity, mihoatra ny 80% ny olon-dehibe amerikana no hanana smartphone. Ny fitaovana finday dia manjaka amin'ny tontolon'ny B2B sy B2C ary manjaka eo amin'ny marketing ny fampiasana azy ireo. Ny zavatra rehetra ataontsika ankehitriny dia manana singa finday amin'izany izay tsy maintsy ampidirintsika amin'ny paikadim-barotra. Inona no atao hoe Marketing amin'ny finday: marketing amin'ny finday na miaraka amin'ny fitaovana finday, toy ny finday marani-tsaina. Ny marketing amin'ny finday dia afaka manome fotoana sy toerana ho an'ny mpanjifa
Somary manify ny statistikanay, saingy faly aho nahita ity tatitra feno toerana ity tonga avy tany Foursquare minitra vitsy lasa izay! Manome sary mivoaka isan-kerinandro ny tatitra momba izay nanamarina, inona ny tratra, na nizara ny fisavana ary ny mpanjifa ambony izy ireo. Mazava ho azy, misy ihany koa ny fiantsoana-hetsika mba hanao fampielezan-kevitra sasany ao amin'ilay tranokala ihany koa… noho izany dia mitady hampitombo ny vola azony i Foursquare. Kudos ho an'ny ekipa Foursquare, na izany aza
Zoma, Jolay 27, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Tsy azoko antoka raha vitsy an'isa amin'ny serivisy jeografika aho, saingy tiako ny mampiasa Foursquare ary manara-maso na aiza na aiza. Ny zavatra mahatsikaiky dia tsy zaraiko matetika ny fizahana nataoko, ary tsy manararaotra ireo special izay arosony koa aho. Ka maninona no ataoko? Hmmm… Tsy hitako izay. Tena tiako ny zava-misy farany an'ny app Foursquare izay manery ahy hanamarina rehefa akaiky aho